अब देखि नेपाल ‘१० करोडभन्दा बढी घु’स लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कै’द स’जाय’! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/अब देखि नेपाल ‘१० करोडभन्दा बढी घु’स लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कै’द स’जाय’!
अब देखि नेपाल ‘१० करोडभन्दा बढी घु’स लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कै’द स’जाय’!
काठमाडौं । १० करोडभन्दा बढी घु’स लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कै’द स’जाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जु’टेको छ । शुक्रबार भ्र’ष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घु’स लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कै’द स’जाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो । समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले घु’स लिएको रकम ज’फत हुने र सोही बराबरको ज’रिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको बताए । १ करोड देखि १० करोड सम्म घु’स लिने व्यक्तिलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कै’द हुने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ ।
यसअघि १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घु’स लिएपनि आठ देखि १० वर्षसम्म कै’द र घु’स (रि’सवत) लिएको रकम ज’फत हुने प्रावधान थियो । १ करोडसम्म घु’स लिने व्यक्तिलाई ४ देखि ८ वर्षसम्म कै’द हुने प्रावधान थपिएको छ । ‘५० हजार रुपैयाँसम्म घु’स लिएमा १ देखि ६ महिना कै’द, ५० हजार देखि १ लाखसम्म घु’स लिएमा ६ महिनादेखि १ वर्ष कै’द, १ देख ५ लाखसम्म घु’स लिएमा २ देखि २ वर्ष कै’द, ५ देखि २५ लाखसम्म घु’स लिएमा २ देखि ४ वर्षसम्म कै’द हुने विषयमा सहमति जुटेको छ’, सभापति गुरुङले भने, ‘२५ लाख देखि ५० लाखसम्म घु’स लिनेलाई ४ देखि ६ वर्ष ‘द, ५० देखि १ करोड घु’स लिएमा ४ देखि ८ वर्षसम्म कै’द, १ करोडदेखि १० करोडसम्म घु’स लिएमा ८ देखि १० वर्षसम्म ‘कै’द र १० करोडभन्दा बढी रकम घु’स लिएमा १० देखि १४ वर्ष सम्म कै’द हुने र घु’स लिएको रकम ज’फत गरी सोही अनुसारको ज’रिवाना गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।’
दफावार छलफलमा सांसद रामनारायण बिँडारीले घु’स लिएको प्रमाणित भएमा अ’भियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति ज’फत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्र’ष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए । सांसद प्रमिला कुमारीले जति ठूलो रकम घु’स लियो त्यति नै बढी कै’द स’जाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । अर्बौ रुपैयाँ घो’टाला गर्नेलाई कम्तिमा पनि २० वर्ष कै’द स’जाय हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भ्र’ष्टाचार वि’रुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले सरकारी, नीजि क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ’ष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्न पनि ऐन संशोधन थालिएको उनले बताइन् । ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवाका क्षेत्र तथा नीजि क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने उनले बताइन् ।
वीरगञ्जमा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृ’त्यु